Samsung Galaxy S6 Edge + natolotra tamin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Samsung Galaxy S6 Edge + naseho tamin'ny fomba ofisialy
Ny hetsika Unpacked farany nataon'ny mpanamboatra Aziatika dia efa nifarana ary namela zava-baovao roa lehibe ho antsika: ny fampisehoana ny Samsung Galaxy Note 5 sy ny Samsung Galaxy S6 Edge +, phablet roa misy toetra teknika izay midera azy ireo eo an-tampon'ny tsena.
Rehefa avy naneho anao ny tsiambaratelo rehetra an'ny Samsung Galaxy Note 5, izao kosa no anjaran'ny Galaxy S6 Edge +, kinova iray an'ny terminal miafina tontonana roa nataon'i Samsung izay manatanjaka efijery 5.7-inch ankehitriny.
1 Volavola an'ny Samsung Galaxy S6 Edge +
4 Ny vidiny sy ny fisian'ny Samsung Galaxy S6 Edge +
Volavola an'ny Samsung Galaxy S6 Edge +
Tamin'ny fahatongavan'i Samsung Galaxy S6, nanaitra anay ny mpanamboatra Koreana tamin'ny fampisehoana finday vaovao roa miaraka amin'ny famaranana premium. Moa ve Samsung nandao ny polycarbonate tao amin'ny sainam-pireneny? Ny fahitana ny faran'ny Note 5 sy ny Galaxy S6 Edge + dia toa izany tokoa.
Ary ilay mpikambana vaovao ao amin'ny elanelan'ny Edge dia mampiseho ny famaranana mitovy amin'ilay kinova mahazatra: vatana misy zana-kazo aluminium fonosina ao anaty sosona vera marokoroko izay manolotra fikitika mahafinaritra tokoa.
Una fananganana mafy izay manolotra famaranana mendrika an-telefaona an'ireto toetra ireto. Raha fintinina dia afaka miteny isika fa ny famolavolana ny Samsung Galaxy S6 Edge + dia mahafinaritra ny maso sy ny mikasika azy toa ireo zandriny lahy.
Ny efijery S6 Edge + dia a Tontonana Super AMOLED 5.7-inch Mahatratra ny vahaolana amin'ny 2560 x 1440 teboka manolotra kalitaon'ny sary mahavariana. Raha manampy an'io lafiny roa miolaka io isika dia mahita ny tenantsika eo alohan'ny telefaona mahery ary manintona.
Asongadino izany loko maranitra tampoka ankoatry ny fanolorana kalitaon'ny sary avo dia avo amin'ny zoro rehetra. Mazava ho azy fa ny fisian'ny tontonana roa miolaka dia mamela ny Samsung Galaxy S6 Edge + hanolotra fiasa mitovy amin'ny maodely mahazatra.
Soa ihany fa nametraka safidy vaovao ireo tovolahy ao amin'ny Samsung izay ahafahanao manararaotra kely kokoa ny lafiny roa miolaka. Amin'izao fomba izao afaka miditra amin'ny rindrambaiko ampiasaina matetika isika ohatra.
Mendrika ve ny mividy ny S6 Edge + fa tsy ny Note 5? Raha raisina ny fiasan'ny lafiny miolaka dia hiteny aho hoe tsia, Raha te hanana telefaona hafa ianao, ny S6 Edge + no safidy tsara indrindra.
Mazava fa telefaona matanjaka be ny Samsung Galaxy S6 Edge +. Hanombohana dia hiresaka momba ny mpikirakira azy isika, misy ny Exynos 7420 SoC, a Chip 8-core misy maritrano 64-bit izay manome fampisehoana tena tsara. Inona no mitovy amin'ny processeur an'ny Galaxy S6 Edge? Eny, fa raha ny dikan-vitamina vitamina an'ny sisin'ny Edge, ny 4 GB an'ny DDR4 RAM dia hisy fiovana lehibe.
Mitovy amin'ny maodely teo aloha Ny Samsung Galax S6 Edge + dia hanana configurations samihafa miaraka amin'ny 32/64 GB fitehirizana anatiny. Tsy misy famantarana ny slot micro SD card; Samsung tsy mianatra amin'ny hadisoany ...
Andao hiroso amin'ny fakantsary. Ny solomaso lehibe dia misy resolutions 16 megapixels manome aperture f / 1.9. Ny fakantsary anoloana dia misy sensor 5 megapixel hahafahanao maka sary-tena sy antso an-tsary manana kalitao mihoatra ny ampy, saingy lavitra ny atolotry ny mpifaninana aminy. Teboka iray hafa izay tsy ianaran'ny Samsung.
Tsara iray hafa nefa miaraka amin'ny bateria: 3.000 mAh dia mety ho tsara amin'ny iray hafa. Tsy maintsy miandry isika ary hijery ny fomba fiasan'ny Samsung Galaxy S6 Edge + amin'ny fitsapana ny fahombiazantsika. Ary farany, ho tonga ny sainam-pirenena vaovao an'ny sisin'ny Edge miaraka amin'ny Android 5.1 eo ambanin'ny tanany.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Samsung Galaxy S6 Edge +
Manomboka amin'ny 21 aogositra ho avy izao, ny singa voalohany amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge + dia azo tahirizina, misy amin'ny loko mainty na fotsy amin'ny a vidiny manodidina ny 899 euro. Ahoana ny hevitrao momba ny Samsung Galaxy S6 Edge + vaovao?
Volavola tsy manam-paharoa sy mamaky tany
Iray amin'ireo telefaona matanjaka indrindra eny an-tsena
Somary ara-drariny ny bateria raha raisinay ny haben'ny efijeryo
Telefaona tena lafo tokoa io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Galaxy S6 Edge + naseho tamin'ny fomba ofisialy
Fampitahana Galaxy Note 4 VS Galaxy Note 5
Samsung dia nanambara ny Galaxy Note 5